Wholesale Side Regedza Crane Mugadziri uye Mutengesi | CCMIE
Rinoshanda: chokufambisa 20ft uye 40ft mudziyo
Kumiswa: Mechanical kuturika kana kuturika mweya
Ngarava yerudzi Landing gear: JOST brand
Trailer mhando Brake system: WABCO
Side Lift Crane yakakosha kireni yaimbosimudza midziyo kubva kune imwe rori kana tirera kuenda kune imwe nzvimbo. Vanhu vanozvitiwo sevadzviriri vemumativi, kukwidza makwande kana kuzvirongedza matrailer, ayo anogona kutibatsira kupa yakanakisa yekubata mudziyo. Chinangwa chedu kugadzirisa basa rekutakura muindasitiri yepasirese yekufambisa. Isu tiri nyanzvi mune karavhani yemidziyo, kubata mudziyo uye kutakura, isu tiri kuramba tichigadzira nekugadzira zvigadzirwa zvitsva zvinogona kuchengetedza nguva yevanoshanda uye muridzi wemari dzezvikwata zvekufambisa. Isu tinoshuvira kupa zvizere mhinduro kune vatengi pasirese. Tiri kuedza kunze bst kuti tipe yakanakisa sevhisi, kugutsikana uye kugadzira kwako.
Kambani yedu "inogara pachibvumirano", inokwanisa kuteedzera kudiwa kwemusika, kutora chikamu mumakwikwi emusika nehupamhi hwepamusoro, kupa vatengi rubatsiro rwakakwana uye rwepamusoro, uye varege vave vakundi vakuru. Kambani iri kutsvaga ndeyekuzadzisa 100% kugutsikana kwevatengi neiyo yekutengesa Side Lift Crane 20ft kusvika 40ft. Isu tinovimbisa kuti isu tinogona kupa yakanakisa mhando mhinduro pane inonzwisisika kumhanya uye nekupa vangangove vatengi vane yakanakisa mushure-yekutengesa rubatsiro. Tichashanda pamwe chete kugadzira inoyevedza Nyika yeSide Lift Crane.
Wholesale Side Lift Crane iri kutengeswa, isu tinotenda kuti neyedu isingachinjike mhando sevhisi, iwe unogona kuwana yakanakisa mashandiro uye yakaderera mutengo mhinduro kubva kwatiri kwenguva yakareba. Isu takazvipira kupa zvirinani sevhisi uye kugadzira yakawanda kukosha kune vese vatengi. Ndinovimba tinogona kugadzira ramangwana riri nani pamwechete.
Zvakatipoteredza kuchengetedza kwekuchengetedzwa kweSide Lift Crane
Zvekuchengetedza nharaunda yedu, ndapota sangana nemarara kubva muchigadzirwa zvakanaka kana iwe ukaita mashandiro uye basa rekugadzirisa. Ive neshuwa kupatsanura, chengeta uye nekurasa kwakachengeteka kwemarara kana iwe uchishanda, kuchengetedza kana kugadzirisa chigadzirwa, bhaketi rekutora Solid tsvina (tsvina mapepa, tsvina simbi) yakagadzirirwa zvakanyanya zvinoenderana nezvimwe zvinodiwa, marara akadzorerwa neanokwanisa unit .
1) Kuunganidza marudzi ese emafuta emarara pamwe nemugomo wakakosha uye wakatarwa "tsvina marara" pabhakiti, edza kudzivirira kubvaruka kana uchiunganidza.
2) Kuchengeta bhatiri: Chengetedza bhatiri remarara munzvimbo yakatarwa uye gadzira chikwangwani chakanyorwa kuti "marara ane njodzi", mushure meizvozvo vanofanirwa kudzoserwa neyuniti inokwanisa.
Pashure: Kuzvichengetera wega Container Trailer
Zvadaro: Side anosimudza masimbi